किन खाने त मेथी, मेथीका फाइदा यस्ता छन् - Samachar PatiSamachar Pati
२८ कार्तिक । मौसमी फलफूल, सागसब्जी नै शरीरका लागि अनुकुल हुन्छ । किनभने यस्ता फलफूल, सागसब्जी त्यही बेला उत्पादन हुन्छन्, जतिबेला हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ । जस्तो कि, अहिले मेथीको साग । यो सिजनमा पाइने सागसब्जीमा एक हो मेथीको साग । विभिन्न स्वास्थ्यबर्द्धक गुणहरुका कारण मेथीको साग अत्यन्त लाभदायक मानिन्छ । मेथीका यी ११ फाइदा के छ त ? १. धेरैजसो मानिसहरुलाई पेटसम्वन्धि मस्याले हैरान पार्छ । यसमा कब्जियत र ग्यास्टि्रक प्रमुख छन् । मेथीको हरियो साग खाँदा तपाईंको पाचनतन्त्रले सुचारुरुपमा काम गर्नुका साथै कब्जियत वा ग्यास्टि्रक जस्ता समस्याबाट छुट्कारा दिलाउँछ ।
तपाईहरुलाई थाहा छ ! खसी बोका को मासुमा भन्दा माछामा पाहिन्छ कयौं गुणा भिटामिन
सेनाको सर्पदंश केन्द्रः धेरैको ज्यान जोगियो